Faa'iidoonyinka Caafimaad uu leeyahay Muuska ama Mooska - Awdinle Online
Home Caafimaadka Faa’iidoonyinka Caafimaad uu leeyahay Muuska ama Mooska
Faa’iidoonyinka Caafimaad uu leeyahay Muuska ama Mooska
Mooska wuxuu ka mid yahay khudaarta ugu badan ee dalkeena laga helo, isla markaana qiimo ahaan ugu jaban. Haddii aad ogaato faa’iidooyinka caafimaad ee mooska, waxaa hubaal inay isbeddeli doonto habka aad u aragto. Cunidda moosku waxay kordhisaa tayada faya-qab iyo caafimaad ee aadanaha.
Moosku waxa uu leeyahay tamar waxaana laga helaa maadada Potassium ka oo faa’iido weyn u leh caafimaadka. Sdioo kale mooska waxaa ku jiro borotiin loo yaqaano “Tryptophan” oo maskaxda firfircooni siiso .
Sidoo kale mooska waxaa laga helaa macdano kala duwan sida fitamiinada B6, C, macdanta magnesium, copper, protein iyo dufan.
FAA’IDOOYINKA MOOS KU UU LEEYAHAY :
Mooska waxa uu leeyahay faa’idooyin aad u tiro badan, lamana tiring karo faa’idooyinka uu mooska leeyahy halkaana laguma soo koobi karo, Faa’idooyinkisa waxaa ka mid ah:
1. Wuxuu isu-miisaama dheecanada jidhka “hormones”: mooska waxa ku jira xaddi badan oo maadooyinka Potassium iyo Vitamin B6 kuwaasoo u roon soo saarista xadiga dheecaan walba ee loo baahan yahay.
2. -Dhiig-karka: Mooska waxaa aad ugu badan maadda potassium, waxaana ku yar cusbada. Hay’adda maamusha cuntada iyo daawada ee dalka Mareykanka ayaa u oggolaatay shirkadaha mooska ka shaqeeya inay si rasmi ah u sheegtaan in mooska uu awood u leedahay inuu yareeyo khatarta dhiig-karka iyo shalalka.
3. Wuxuu yareeyaa Niyad-jabka “Depression”: Moosku wuxuu yareeyaa heerka cadaadiska maskaxda ee ka dhasha wel-welka, walbahaarka iyo caloolyowga.
4. Waxa uu daweeyaa gaasta : moosku waxa uu ka hortagaa gaasta iyo nabarada ku samaysma caloosha iyo mindhicirada. Sidoo kale moosku waxa uu daweeyaa gaasta iyo nabarada caloosha.
5. Moosku wuxuu ilaaliya Tayada dhiiga: moosku waxa uu ilaaliya tayada iyo caafimaad qabka nudayaasha dhiiga. Cun 2 moos ah subax walba si aad uga badbaado dhiig-la’aanta.
6. Waa u daawo calool istaagga:- Maadaama moosku leeyahay Baal “Fiber” waxa uu daweeyaa calool istaaga. Cun 2xabo oo moos ah maalin walba oo ka takhalus calool istaaga.
7. Waxa laga helaa tamar “Energy”:- Mooska waxa ku jira 3 sonkorood oo dabiici ah oo kala ah fructose, glucose iyo sucrose kuwaasoo ka caawiya jidhku inuu helo tamar ku filan.
8. Wuxuu xoojiyaa lafaha:- Moosku waxa uu xoojiyaa lafaha. Moosku wuxuu fududeeyaa nuugista calcium ka oo ah maaddo lafaha u roon. Sidaa darted waxa uu lafaha ka dhiga kuwo caafimaad qaba oo xoogan.
9. Wuxuu la dagaalama cudurada: Moosku waxa uu yareeya sumowga jidhka waxana uu jidhka ka nadiifiyaa wasakhda.
10. Wuxuu kordhiyaa xusuusta: cunidda moosku waxay sare u qaadaa awooda xusuuseed ee qofka. Xaddi badan oo ah Maadooyina tryptophan, potassium iyo magnesium ee ku jira moosku waxay sare u qaadaan xusuusta.
11. Waxa uu yareeyaa halista dhiig-karka: Moosku waxa uu yareeyaa halista qofku ku qaadi karo xanuunka dhiig-karka “Dilaaga aamusan”. Maadaama mooska ay ku yartahay maadada Sodium isla markaana ay ku jirto Potassium badan wuxuu 10% yareeyaa halista dhiig-karka.
12. Wuxuu caawiya Luminta miisaanka dheeriga ah: Moosku waxa uu sahlaa saarista iyo luminta baruurta aan loo baahnayn ee jidhku kaydiyo.
13. Moosku waxa uu yareeya xanuunada maskaxda: xaddi magnesium ah oo ku jira Moosku ayaa yaraysa xanuunada ku dhaca maskaxda sida Alzheimer’s ka iyo Parkinson’s-ka.
Mahadsanid Qore Dr. Faris Al Attas
Previous articleDowladda Turkiga oo noqtay Dalkii ugu horeeyey ee ka soo Jawaaba Fatahaadaha Beledweyne
Next articleMogadishu: Government offices shutdown, security tight amid Al-Shabaab attack fears
Soomaaliya oo la keenayo tallaalka COVID-19